Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Diyaarad by cilmi baarista laminar (dhow dhow!) News Toosh!
Nidaamka Soo-kabashada Parachute waxaa la rakibay usbuucii la soo dhaafay wuxuuna u shaqeeyaa sidii la filaayay. Tijaabooyinkii duulimaadka ee bilowga ahaa ee VR ayaa bilaabmay. The VSKYLABS Aeroprakt A22 ayaa la soosaaray oo loo habeeyay si loo muujiyo jilitaanka duulimaadka Aeroprakt A22 oo aad u sax ah marka la eego nidaamyada, howlaha, waxqabadka diyaaradaha iyo astaamaha maaraynta.
Sida walaalkeeda weyn ee dhabta ah, diyaaraduhu waxay leeyihiin tayo maamul wanaagsan, muuqaal sare waana mid la saadaalin karo oo jawaab celin ah. Waa diyaarad aad u karti badan.
Taariikhda sii deynta wali lama cayimin, sikastaba, mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22 ayaa hada hogaaminaya mashruuca * hormar la'aanta * ee 'shaybaarada.
Shaashadda ku lifaaqan - muunad dhaqso leh oo ka socota jawiga qoob-ka-ciyaarka isbeddelaya.